Recover Outlook Express Drives & disk မှအီးမေးလ်များ
DataNumen Outlook Express Drive Recovery တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ ဆယ်တင်နိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခု Outlook Express drives တွေကို & disk များထံမှအီးမေးလ်များကိုတိုက်ရိုက်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သိမ်းဆည်းထားကြသကဲ့သို့ Outlook Express DBX သို့မဟုတ် MBX ဖိုင်များသည်ယခင်အတိုင်း local drives (သို့) disk များပေါ်တွင်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။ မရပါ Outlook Express သင့်အတွက်အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ဒီမှော်ကိရိယာကိုသင်အမြဲတမ်းသုံးနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Outlook Express Drive Recovery?
ဖျက်ပစ် Outlook Express .dbx ဖိုင်တွဲတွေပြီးရင်အမှိုက်ပုံးထဲကအမှိုက်ပုံးထဲသွန်ပစ်လိုက်ပါ။
အမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ပါ Outlook Express အမှားအယွင်းအားဖြင့် .dbx ဖိုင်များ။
ပါဝင်သည့် drive ကို format လုပ်ပါ Outlook Express အမှားအယွင်းအားဖြင့် .dbx ဖိုင်များ။
ပါဝင်သည့်အခန်းကန့်ကိုဖျက်ပစ်ပါ Outlook Express အမှားအယွင်းအားဖြင့် .dbx ဖိုင်များ။
အမှားနှင့် l အားဖြင့် disk ကိုပြန်လည်ခွဲဝေost .dbx ဖိုင်များပါဝင်သော drive ။
ဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်မှုကြောင့် .dbx ဖိုင်များပါသည့် drive သို့မဟုတ် disk ကိုဖတ်။ မရပါ။
dbx ဖိုင်များပါရှိသော drive သို့မဟုတ် disk သည်မဖြစ်နိုင်ပါtarTR သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းသည် MBR၊ partition table သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များနှင့်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။ မရသောအခြားကိစ္စရပ်များအတွက် Outlook Express သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ drives များသို့မဟုတ် disk များတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များကိုသင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Outlook Express Drive Recovery.
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Outlook Express Drive Recovery v1.0
Microsoft ၏မူကွဲအားလုံးပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ပံ့ပိုးမှု Outlook Express အီးမေးလ်များ
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု Outlook Express hard disk, flash drives, floppy disk စသည့်မည်သည့် drives သို့မဟုတ် disk မှမဆိုအီးမေးလ်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု Outlook Express အကျင့်ပျက်မီဒီယာကနေအီးမေးလ်များ။
16777216 TB (ဆိုလိုသည်မှာ 17179869184 GB) အထိကြီးမားသော drives များသို့မဟုတ် disk များမှပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ပံ့ပိုးမှု။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Outlook Express Drive Recovery အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သိမ်းဆည်းထားကြသကဲ့သို့ Outlook Express သင့်ရဲ့ drive (သို့) disk ထဲရှိဒေတာများ၊ Outlook Express ဒေတာ, သင်အမြဲတမ်းသုံးနိုင်သည် DataNumen Outlook Express Drive Recovery ပြန်လည်ထူထောင်ရန် Outlook Express သင့်အတွက် drives များသို့မဟုတ် disk များမှ email များ။ ပြန်လည်ရယူထားသောအီးမေးလ်များကို .eml ဖိုင်များအဖြစ်သိမ်းဆည်းပြီး၊ Outlook Express.
မှတ်ချက်။ ။ ဒေတာဘေးအန္တရာယ်သင့်မကြာမီဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည် OUTLOOK EXPRESS SOURCE Drive သို့မဟုတ် DISK တွင်တည်ရှိသည့်ဒေတာများ၊ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို drive သို့မဟုတ် disc တွင်မည်သည့်အချက်အလက်မျှမရေးသားပါနှင့်။ မပြောင်းပါနှင့်။ DOEDR သည်ထို drive မှ disk တစ်ခုတည်းကိုသာဖတ်ပြီး၎င်းမှမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမှမည်သည့်အခါမှရေးသားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းမည်မဟုတ်ပါ။
မှတ်စု: ပြန်လည်မရယူခင် Outlook Express အီးမေးလ် DataNumen Outlook Express Drive Recoveryကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်ပါ Outlook Express.
ယုတ္တိ drive ကိုဘယ်မှာသင်၏ Outlook Express dbx ဖိုင်များသည်မူလသိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်တည်နေရာကိုမူမပြောင်းလဲသေးပါ။ ထို့နောက် scan ဖတ်ရန်အတွက် drive ကိုရွေးချယ်ပါ။
မဟုတ်ပါက disk ၏ပြန်လည်ခွဲခြမ်းမှုကြောင့်ယုတ္တိ drive ကိုမတည်ရှိတော့ပါက lost MBR သို့မဟုတ်အခန်းကန့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များသို့မဟုတ် logical drive ကို Partition Magic ကဲ့သို့သော partition tools များဖြင့်အရွယ်အစားပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းခံရလျှင် dbx ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမည့်အရင်းအမြစ် disk အဖြစ်သိမ်းဆည်းရန် hard disk တစ်ခုလုံးကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ disk ကိုကွန်ပျူတာကိုသင်တပ်ပြီး (သို့) ထွက်လိုက်ရင်၊ DataNumen Outlook Express Drive Recovery စတင်သည်, ထို့နောက်သင်ကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် combo box ထဲရှိ drive နှင့် disk list ကို refresh လုပ်ရန်
ကျေးဇူးပြု၍ output ဖိုင်တွဲကိုရွေးပါ။
ပြန်လည်ရယူထားသောအီးမေးလ်များအားလုံးကို output ဖိုင်တွဲတွင် .eml ဖိုင်များအဖြစ်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ Output folder name ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည် folder ကို browse နှင့်ရွေးချယ်ဖို့ခလုတ်ကို။
မှတ်စု: သင့် Overwriting ကာကွယ်တားဆီးဖို့ OUTLOOK EXPRESS SOURCE Drive သို့မဟုတ် disk ပေါ်မှဒေတာများ၊ ထွက်ရှိထွက်ရှိသည့် Folder တစ်ခုကို Sours Drive သို့မဟုတ် disk ထဲတွင်မရွေးချယ်ပါနှင့်။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen Outlook Express Drive Recovery အလိုလိုtarရွေးချယ်ထားသော drive (သို့) disk ကို scan ဖတ်ပြီး၎င်းမှအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်း။ တိုးတက်မှုဘား
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်၊ drive (သို့) disk မှမည်သည့်သတင်းစကားကိုမဆိုပြန်လည်ရရှိပြီးပါက၊ အောက်ပါအတိုင်း message box တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုသင်သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည့်သတင်းစကားကိုဖွင့်နိုင်သည် Outlook Express ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ output directory ထဲတွင် .eml ဖိုင်၏အိုင်ကွန်။ ဒါမှမဟုတ် မက်ဆေ့ခ်ျမျိုးစုံကိုမေးလ်ဖိုင်တွဲထဲထည့်ပါ Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Drive Recovery ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊